Departemantan'ny Fampianarana in Ukraine. Mahasoa Info ho an'ny vahiny mpianatra
Departemantan'ny Fampianarana in Ukraine
Okrainiana ny rafi-pampianarana dia voafehin'ny ny Lalàn'ny Ukraine ary ahitana:
miditra mianatra fampianarana;
fampianarana ambaratonga faharoa;
ara-teknika sy arak'asa fanabeazana;
, nahazo diplaoma teny fanabeazana;
Fa Okrainiana, toy ny maro ny Eoropeanina, ny fanabeazana dia manomboka amin'ny sekoly fanabeazana mialoha ny andrim-panjakana, matetika – amin'ny akanin-jaza. In 2 (indraindray amin'ny 1.5), ny ankizy mahazo ao amin'ny fihinanam-bilona, amin'ny 3 – ao amin'ny vondrona tanora.
Indraindray, ny fianakaviana manapa-kevitra ny hampianatra ny ankizy ao an-trano, fa satria 2001, miditra mianatra ny fanabeazana tsy maintsy atao ho an'ny ankizy 5 taona. Ray aman-dreny dia afaka mifidy ny akanin-jaza na vondrona fohy ho Mpanohana, ankehitriny mihoatra noho 1,000 toy izany vondrona miasa any Ukraine. Ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa vondrona miasa mba hanomana ny ankizy any am-pianarana. Future mpianatra rehefa ao dia handray fahalalana fototra, ary koa ny hatao nahalala ny lalan'ny am-pianarana, mpampianatra sy ny mpiara-mianatra aminao. miaraka 6 taona ny ankizy dia afaka mandeha an-tsekoly.
Fampianarana ambaratonga faharoa
Tsy terena, ary dia azo amin'ny karazana sekoly, ny ankamaroany – ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Misy ambaratonga telo:
I – sekoly fanabeazana fototra (naoty 1-4), Kilonga Maneran-tany dia manome fanabeazana,
II – sekoly ambaratonga voalohany (naoty 5-9), manome fanabeazana fototra ankapobeny;
III – Lycée (naoty 10-11), manome feno fianarana faharoa.
Ny fametrahana fianarana – -manodidina rehetra fampandrosoana ny zaza, manome azy ny fahalalana, izay mitaky izany ny fiaraha-monina. Ny sekoly dia tokony hampiroborobo ny tena matihanina-kevitra, ara-batana fampandrosoana sy ny fananganana ny fototra ara-pitondrantena sy ny etika fitsipika.
Fanampiny fampandrosoana ny fahaiza-manao sy ny talenta tratra amin'ny tsy fianarana. Ireo sekoly fanatanjahan-tena dia ahitana fikambanana, sekoly ny kanto, isan-karazany ny fikambanana mpianatra sy ny fikambanana mitovy, -panjakana na tsy miankina.
Ara-teknika sy arak'asa fanabeazana
Tsy nifantoka tamin'ny fahazoana manokana manokana. Ary noho izany, ho azy ireo mba halefa any amin'ireo toeram-pianarana izay miasa manofana asa matihanina. Io sekoly arak'asa sy ny sekoly ambony (kanto, ara-teknika, ambony), sekoly-agricultural orinasa sy ny orinasa, fanofanana foibe sy ny toy izany toerana. Koa izy ireo dia ahitana foibe fanofanana arak'asa, fanofanana sy ny retraining ny mpiasa.
Arak'asa sekoly matetika miara-miasa amin'ny orinasa – fiofanana ho an'ny mpanjifa. Mba hahazoana ny miasa mpianatra asa amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mianatra, satria azo fiofanana mivantana amin'ny orinasa mpamokatra entana.
Fianarana ambony any Ukraine dia narafitra mifanaraka amin'ny fanabeazana rafitra ny firenena mandroso, izay manara-maso UNESCO, ny Firenena Mikambana sy ireo fikambanana iraisam-pirenena. Manome ny fototra ara-tsiansa, matihanina sy ny fampiofanana azo ampiharina, retraining sy ny fahaizana ny mpianatra.
Endriky ny fianarana ao amin'ny fampianarana ambony andrim-dia hafa: fotoana feno, tapak'andro, lavitra na mitambatra, izay Mitambatra maro ireo teny.
Fa anjerimanontolo, misy ambaratonga efatra ny fankatoavana:
I – sekoly sy ny mitovy lenta ara-teknika fampianarana ambony andrim-panjakana;
II – College sy ny fanabeazana ambony dia mitovy azy andrim-panjakana;
III sy IV (arakaraka ny vokatry ny fankatoavana) – Institute, conservatory, Akademia, anjerimanontolo.
Koa satria 2008, ny fepetra takiana mialohan'ny ahafahana fieken-keloka ny fampianarana ambony dia ny fandehan'ny iray tsy miankina tombana ivelany (UPE). In 2016, mpianatra dia handray ny fitsapana toy izany foto-kevitra:
Okrainiana teny sy ny boky aman-gazety, tantaran'i Ukraine (hatramin'ny ela ho amin'ny andro ankehitriny), simia, Fizìka, Haiaina, Matematika, geography, ary koa – anglisy, Espaniola, alemaina, Rosiana sy Frantsay.
Rehefa avy nahazo diplaoma dia afaka mahazo ny diplaoma – ao amin'ny lahatsoratra-nahazo diplaoma sy ny fianarana. Anisan'izany ny fanoratana sy ny fiarovana ny thesis – PhD na doctorat tsirairay avy – ary koa ny fahazoana ny fikarohana sy ny fampianarana traikefa.
, nahazo diplaoma teny fanabeazana
Fanabeazana, nahazo diplaoma teny dia ahafahana mahazo fepetra vaovao, asa na ny fibodoana. matetika, izany mitranga eo amin'ny fototry ny efa nahazo fanabeazana tao amin'ny sekoly teo aloha, Na dia afaka mahazo ny vaovao sy manokana. Mba diplaoma fanabeazana andrim-panjakana dia Institiota (foibe), fanampiny fiofanana na retraining, ny mifanaraka vondrona ny fianarana ambony andrim-panjakana, fampianarana arak'asa andrim-panjakana, siansa sy ny methodological foiben'ny fampianarana arak'asa sy ny subdivisions ao amin'ny fikambanana sy ny orinasa.
UPD: Koa satria 2016 Fidirana dingana amin'ny anjerimanontolo Okrainiana ho an'ny mpianatra vahiny aviable alalan'ny Okrainiana fieken-keloka Center.
Dia mety ho mahasoa ho anao
TOP 7 ara-teknika anjerimanontolo in Ukraine 2016
Fidirana dingana & fepetra takiana in Ukraine
Best oniversite mba hianatra ny fitsaboana any Ukraine 2016